Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » सरकारी कर्मचारी कसैलाई भ्याइनभ्याइ, कसैलाई सुतीसुती तलब !
सरकारी कर्मचारी कसैलाई भ्याइनभ्याइ, कसैलाई सुतीसुती तलब !
काठमाडौं, भदौ १५ । गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन, त्यसपछि बिभिन्न कडाई र भदौ ३ गते यता निषेधाज्ञा जारी छ । यसले जनजीवनका सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । अझ निजी क्षेत्रको स्थिति त दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बनिरहेको छ ।
तर, यो सं कटले नछोएका वा उल्टै फाइदामा रहेका नेपालीहरु पनि छन् । उनीहरुको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आउँछन् सरकारी कर्मचारीको एक हिस्सा ।
को रो नासँग लड्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीलाई यतिबेला बडो हाइसन्चो छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु घरमा सुतीसुती तलब पकाइरहेका छन् ।
यस्ता कर्मचारीको कुरा गर्दा सबैभन्दा भाग्यमानी मान्नुपर्ने हुन्छ सरकारी शिक्षक र शैक्षिक संस्थाका कामदारलाई । हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् । मावि तहमा १ लाख २ हजार, निमाविमा २५ र मावि तहमा १९ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांस ११ चैतदेखि फुर्सदिला छन् । स्कुल क्याम्पस नखुलेकाले घरमा मोबाइल चलेर उनीहरुको दिन बितिरहेको छ ।
यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट पढाइरहेका छन् । तर सरकारी शिक्षकलाई त्यो चटारो पनि छैन । मुख्य मुख्य शहर र इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा केही स्कुल र थोरै शिक्षकले विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिएका छन् । बाँकी सबै ढुक्कले लकडाउन मनाइरहेका छन् ।
कुनै काम नलगाएको भए पनि सरकारले यी शिक्षकहरुको तलब एक रुपैयाँ काटेको छैन । जबकि निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले काम गरेर पनि तलव खान पाएका छैनन् । कक्षा १० सम्मका निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकको संख्या करिब १ लाख ५० हजार छ भने कर्मचारी ५० हजारको हाराहारीमा छन् ।
शिक्षक शिक्षिका बाहेक अन्य कर्मचारीहरुले पनि यो बेला आराम पाएका छन् । ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु अफिस त गएका छन्, तर आलोपालो । विभिन्न संस्थान, विभाग, भन्सारसहित सबै कार्यालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारी उपस्थित भएर आंशिक खुला राखेका छन् । बाँकी कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ । संवैधानिक निकायहरु पनि खासै खुलेका छैनन् ।
तर, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था फरक छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फ्रन्ट लाइनमा खटिएर कोभिडको असर न्युनिकरणमा जुटेका छन् । सं क्रमितको उपचार, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ सबै काम स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारीबाट भइरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायमा कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै खटिएका छन् । को रो ना सं क्रमण परीक्षण गर्ने, सं क्रमण देखिए उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भने मुलुकभर पूर्ण सञ्चालनमा छन् । सुरक्षासँग जोडिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनामा भने कसैलाई बिदा दिइएको छैन । बिदामा बसेकालाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ ।
को रो नाको असर कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै हो । सुरक्षा दिने सुरक्षा निकायले नै दिने हो । तर, कन्ट्याक ट्रेसिङको काम स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायभन्दा का कर्मचारी भन्दा बाहिरकाले पनि गर्न सक्छन् ।
‘मैले सुनेको हो तर, पत्र आएको जानकारीमा छैन । पत्र आएको भएपो त्यसबारे छलफल हुन्छ,’ शर्माले भने ।